‘गोपी’मा बर्षाको इन्ट्रि, खगेन्द्रसँग दुई हिरोइन ! | Cine Khabar
पूजा र आकाशविच ‘झुम्कावाली र चश्मावाला’को कुरा
‘जुलेबी’मा छमछम नाँचे प्रदीप र पूजा
‘चकलेटी स्याँउ’मा नाचे सागर, प्रिज्मा र प्रिन्सी
‘आयो दशैं’मा पुष्प र तनुजाकोे वियोगको पीडा
रोशनको प्रेममा चुपचाप डुब्दैछिन् नम्रता
दर्शक हसाँउने ‘उकुसमुकुस’
Home latest news ‘गोपी’मा बर्षाको इन्ट्रि, खगेन्द्रसँग दुई हिरोइन !
‘गोपी’मा बर्षाको इन्ट्रि, खगेन्द्रसँग दुई हिरोइन !
on: १४ श्रावण २०७५, सोमबार १४:३१ In: latest news, newsTags:
छायांकनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘गोपी’मा अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेको अपोजिटमा दुई अभिनेत्री रहने पक्का भएको छ । हालै लिड अभिनेत्रीको रुपमा वर्षा सिवाकोटी पनि जोडिएकी छिन् । फिल्ममा यसअघि नै अभिनेत्री सुरक्षा पन्त अनुबन्धित भइसकेकी छिन् ।
‘गोपी’को पटकथाले अन्तिम रुप लिएसँगै वर्षालाई कास्ट गरिएको निर्देशक दीपेन्द्र लामाले बताए । फिल्मको घोषणा हुँदा खगेन्द्र र सुरक्षामात्र अनुबन्धित भएका थिए । निर्देशक दीपेन्द्रका अनुसार पटकथालाई सुहाउने भएकीले वर्षालाई लिइएको हो । दुई अभिनेत्री रहेपनि त्रिकोणात्मक प्रेमकथा भने नरहेको उनले प्रष्ट्याए ।
खगेन्द्रले यसअघि वर्षासँग ‘पशुपति प्रसाद’ र सुरक्षासँग ‘धनपति’मा अभिनय गरिसकेका छन् । आफ्ना अघिल्ला अभिनेत्रीहरुसँग फेरि एकसाथ एउटै फिल्ममा काम गर्न पाउँदा खुसी लागेको खगेन्द्रले बताए ।
यो रमाइलो संयोग हुनपुग्यो, वर्षा र सुरक्षा दुवैसँग पहिला काम गर्दा राम्रो अनुभव भएको थियो, यसपालि पनि पक्कै राम्रो हुनेमा म विश्वस्त छु,’ खगेन्द्रले भने ।
वर्षा र सुरक्षाले भर्खरै रिलिज भएको फिल्म ‘भैरे’मा सँगै काम गरेका थिए ।
‘पशुपति प्रसाद’मा खगेन्द्र दाइसँग काम गरे पनि खासै स्क्रिन सेयर गर्न पाएकी थिइन, तर गोपीमा दर्शकले उहाँ र मेरो केमिस्ट्री अलि बढी नै हेर्न पाउनुहुनेछ,’ वर्षाले भनिन् ।
वर्षाको आगमनले फिल्ममा ग्ल्यामर थपिएको महसुस गर्छिन् सुरक्षा । ‘पछिल्लो समयका सुन्दर अभिनेत्रीमध्ये एक पर्छिन् वर्षा, उनी पनि ‘गोपी’मा जोडिएको खबरले म उत्साही छु,’ सुरक्षाले बताइन् ।
आरोही केसी निर्माता, श्रीधर पौडेल कार्यकारी निर्माता रहेको ‘गोपी’को छायांकन आगामी भदौ १ गते काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ । फिल्ममा निर्देशक दीपेन्द्रको कथा, सामिप्यराज तिमल्सिनाको पटकथा, शैलेन्द्र डि कार्कीको छायांकन र निमेष श्रेष्ठको सम्पादन रहनेछ ।
यो फिल्मलाई आगामी चैत १५ गते रिलिज गर्ने विषयमा वितरकसँग सहमति भएको कार्यकारी निर्माता श्रीधरले बताए । न्ह्यू बज्राचार्य, अर्जुन पोखरेल र कल्याण सिंहको संगीत रहने फिल्मका गीतहरु विप्लव प्रतीक र बुद्धिसागरले लेखेका छन् । कल्याणको संगीत रहेको गीत शिव परियारले गाएका छन् भने अरु दुई गीतका गायक गायिका टुंगो लाग्न बाँकी रहेको निर्माण टिमले बताएको छ ।
आर्यन र साम्राज्ञीको ‘कायरा’ नयाँ गीत रिलिज (भिडियो)
छक्का पञ्जा ३ को ‘पहिलो नम्बरमा’ अफिसियल गीत रिलिज (भिडियो)
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार १९:२१
१७ मंसिर २०७८, शुक्रबार १८:४५
१५ मंसिर २०७८, बुधबार १७:१५
१९ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:४६
१६ आश्विन २०७८, शनिबार १७:०३
१५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १७:५६